Zvishongedzo fekitori - China zvishongedzo Vagadziri, vatengesi
Izvo zvinhu zvakajairwa chubhu yakabatana Polypropylene (PP): Yakanaka kemikari kuramba, inoshanda tembiricha renji -17 ℃, 135 ℃, uye inogona kuiswa disinfected ne ethylene oxide kana autoclave. Yakajairwa hosi yekubatana chimiro Yakatwasuka "Y" chimiro, chinodzora mhando Tafura yechubhu yakabatana pamwe yakakodzera tubing Yakarurama Inner dhayamita Inokodzera Tubing (inch) (mm) 1/16 ″ 1.6 13 # 14 # 1/8 ″ 3.2 16 # 3/16 ″ 4.8 15 # 25 # 1/4 ″ 6.4 17 # 24 # 3/8 ...
Footswitch JK-1A, JK-2K, JK-3A, JK-4A tsoka switch switch yakakamurwa kuita chikamu cheyodhi modhi uye yekudhiraina modhi. Inogona kudzorwa nepedhi kana kutsika kudzora dunhu, panzvimbo pekushandisa iyo pisitori yepombi kana sirinji pombi neruoko. Inogona kusunungura maoko emushandisi kuti aite imwe tsvagiridzo.
Kuzadza Nozzle Uye Counter Sunk
Anti-adsorption countersunk musoro Iyo simbi isimbi isina chinhu, iyo yakabatana neiyo nzira yeiyo chubhu yekudzivirira iyo pombi chubhu kubva mukuyangarara kana kuyamwa pamadziro emidziyo, kuti iyo mvura isvike zvachose mukati, kuve nechokwadi chekugadzikana uye kurongeka kwekutapurirana . Inokodzera akasiyana peristaltic pombi hoses uye inogona kuve yakagadzirirwa Simbi isina simbi yekuzadza tsono Inonyanya kushandiswa pakubuda kwepombi yekuzadza huwandu uye kutapurirana kutenderera kudzivirira kupwanya uye ini ...
Inokodzera pombi yekutyaira 5 ex-control nzira WT600F-1A BT100L-1A BT100J-1A BT100F-1A BT300J-1A BT300F-1A BT600-2J WT600J-2A 0-5V analog chiratidzo 0-10V analog chiratidzo 4-20mA analog chiratidzo 0-20hz RS485 kutaurirana
Kugovera Controller FK-1A
Kugovera Controller Kupa nguva 0-99.99 Yechipiri / 0-99.99min / 0-99.99hour Nguva yekumira 0-99.99 Chechipiri / 0-99.99min / 0-99.99hour Nguva resolution 0,01S / 0.01m / 0.01h Kushanda mode Imwe kana yakawanda Yekunze chengetedza OC gedhi Yekuyeuka basa Regedza pombi, mushandisi anogona kusarudza kuti aenderere mberi zvinoenderana nehurumende pamberi pesimba-pasi Magetsi AC ACV / 5W